सुटिङका क्रममै पक्राउ परे शाहरुख खान, यस्तो छ कारण ! - Everest Dainik - News from Nepal
सुटिङका क्रममै पक्राउ परे शाहरुख खान, यस्तो छ कारण !
काठमाडौंः बलिउड स्टारहरुको हिरासतसम्म पुग्नु कुनैं नौलो होइन । कुनै घटनाका करण उनीहरु जेल पनि जान्छन् । संजय दत्तदेखि सलमान खानसम्म हिरासत पुगेकै हुन् । यीनै बिच रोमान्सको किंग भनेर चिनिने बलिउड अभिनेता शाहरुख खान पनि जेल पुगेका छन् । एक पटक आफ्नो रिसका कारण उनी प्रहरी हिरासत जानु परेको थियो ।
शाहरुख खान हालसालै एक कार्यक्रममा पुगेका थिए । त्यस समयमा उनले आफ्नो जीवनका धेरै कथाहरू बारे खुलासा गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको शाहरुखले एउटा किस्सा सुनाए ।
याे पनि पढ्नुस खानामा बिष मिसाएर लता मंगेशकरलाई गरिएको थियो मार्ने प्रयास
शोको क्रममा शाहरुख खानलाई धेरै बर्ष अघि एउटा पत्रिकामा प्रकाशित एउटा लेखको बारेमा सोधिएको थियो जसमा उनी जेल जानुको कारण बन्यो । शाहरुखले सो पत्रिकामा छापिएको लेख पढेपछि यति रिसाए कि उनले पत्रिकाको सम्पादकलाई टोलिफोनबाट धम्की दिए । जसमा सम्पादकले उनीलाई शान्त हुन र लेखलाई मजाकको रूपमा लिनलाई बारम्बार आग्रह गरे ।
शाहरुखले सम्पादकको कार्यबाट रिसाए र सीधै पत्रिकाको कार्यालयमा गएर रिसाउदै दुर्व्यवहार गरे । यसपछि दोस्रो दिन शाहरुखको सुटिङ स्थलमा प्रहरीहरु आइपुगे र उनीहरूसँगै हिड्न भने । यहाँ चाखलाग्दो कुरा के छ भने शाहरुखले ती प्रहरीहरू उनका प्रशंसकहरू भएको सम्झिए । उनीहरूसँग भेट्न चाहन्छन् र उनीसँग जाने निम्तो दिइरहेका छन् । तर पछि उनले पत्रिकाको सम्पादकको उजुरीमा उनलाई पक्राउ गर्न आएको बुझे ।
शाहरुखले भने, ‘त्यस समयमा प्रहरीले मलाई पक्रियो र हिरासतको एउटा कोठामा राख्यो । मैले त्यहि पहिलो पटक प्रहरी हिरासत देखे जुन एकदम सानो ठाउँमा बनाइएको थियो र धेरै फोहर थियो । त्यहाँ मल र मूत्रका थुप्रा थिए ।’ शाहरुखले एक दिन प्रहरी हिरासतमा बिताउनुर्पयो र बेल पनि पाएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस पद्मावतको एकसातामा कीर्तिमानी कमाई, बलिउडका तीन खानका फिल्मको रेकर्ड ब्रेक
कुरा १९९३ को फिल्म ‘माया मेमसाहब’ हो । जसमा शाहरुखले फिल्म निर्देशककी श्रीमतीसँग एक प्रेम दृश्य बनाउनुपरेको थियो । ९० को दशकमा यस्ता सिमहरू एकदम बोल्ड मानिन्थ्यो ।
यस फिल्मको दृश्यको बारेमा म्यागजिनका सम्पादकले लेखेका थिए, फिल्मका निर्देशक केतन मेहताले शाहरुखलाई एक रात आफ्नी श्रीमतीसँग बस्न आग्रह गरे ताकि उनीहरूले एक अर्कालाई चिनुन् र प्रेम दृश्य शूट गरुन् ।
यो लेख पढेर शाहरुख रिसाए । त्यसपछि पत्रिकाको अफिसमा गए र लेखकलाई मार्ने धम्की दिए ।
ट्याग्स: बलिउड, शाहरुख खान